yakajeka simbi extruder skrini mukutenderera chimiro
pachena waya pajira riya, kazhinji ine suuare mesh uye dutch mesh uye herringbone mesh .Imwe yeedu anowanzo gadzirwa "akagadziriswa mafirita" ndeye extruder skrini. Dzimwe nguva mafirita aya anonzi zvakare mascreen packs, zvese zvinoreva chinhu chimwe chete.
Extruder skrini anodiwa kune chero extruder ye polymer kana plastiki. Tichaongorora zvese zvinhu zvekuwedzera masikirini mune ino chinyorwa, kubva kutsananguro kusvika pamutengo kusvika pamabatirwo avakaitwa.
Extruder skrini iri mumhando dzakasiyana dzetambo mesh yakatemwa kuita zvidimbu. Izvo zvinhu zvinonyanya kuve simbi yakajeka, simbi isina chinhu uye zvimwe zvinhu. Stainless simbi skrini mapakeji anodzivirira ngura kupfuura mamwe materail. Stainless Simbi Extruder Screens anoshandiswa zvakanyanya pane epurasitiki jira extruder,, granulator, uye machira asina kurukwa, color masterbatch, nezvimwewo Mesh: 10 ~ 400Mesh Discs ane akasiyana maumbirwo, senge kutenderera, mativi, itsvo, oval uye inogona kuitwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi ....
Kwakakurudzira haisi simbi kana chiwanikwa; inzira inoshandiswa kuputira zingi inodzivirira simbi kudzivirira ngura. Mune waya mesh indasitiri, zvisinei, inowanzo kurapwa seyakaganhurirwa chikamu nekuda kwekupararira kwayo kushandiswa mumhando dzese dzekushandisa.Galvanized Wire Mesh inogadzirwa neakakurudzira simbi waya. Iyo zvakare inogona kuitwa yesimbi waya ipapo zinc kupfeka kwakakurudzira. Kazhinji kutaura, iyi sarudzo inodhura, inopa yakakwira mwero kusagadzikana.it iri ...
Plain simbi, inozivikanwawo secarbon simbi, isimbi yakashandiswa zvakanyanya muwaya mesh indasitiri. Iyo inonyanya kugadzirwa nesimbi uye shoma kabhoni. Kuzivikanwa kwechigadzirwa kunokonzerwa nemutengo wayo wakaderera uye kushandiswa kwakawanda. Plain waya pajira riya, inozivikanwawo seye balck iron jira .black waya pajira riya .it rakagadzirwa nechepasi kabhoni simbi waya, nekuda kwenzira dzakasiyana dzekuruka .inogona kuve yakakamurwa kuita, bani kuruka, dutch kuruka, herringbone kuruka, bani chiDutch kuruka. Plain simbi waya pajira riya iri stro ...
Chinokosha Zita: Epoxy yakavharwa waya netting uye dzakasiyana waya mesh Chinyorwa: Yakagadzirwa yepamusoro simbi simbi waya, isina simbi waya, aruminiyamu chiwanikwa waya, epoxy yakavharwa mushure mekuruka pachena. Mavara akasiyana siyana esarudzo yako. Zvimiro: Kurema kwechiedza, kwakanaka kuchinjika, yakanaka ngura kuramba uye kufefetedza, nyore kuchenesa, yakanaka inopenya uye inoshamwaridzana nharaunda. Munda weKushandisa: Uku kutsanangurwa kunoshanda kune epoxy yakavharwa waya pajira riya (rudzi rweMachira; pachena weave) yeguerifurated pleated firita e ...
Stainless simbi yakarukwa waya pajira riya inoitwa kubva isina simbi waya. Stainless simbi waya ndeyekupfeka-kuramba, kupisa-kupisa, acid-kuramba uye ngura kuramba. mamakisi akasiyana esimbi isina waya anoshandiswa mu waya mesh. akasiyana matrials anoshandiswa mune chaiwo mafomu ekushandisa yakasarudzika chivakwa. Isu tinogadzira waya mesh mumhando dzakasiyana dzemhando. Iko kuruka kwakatemerwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, senge zvinhu, waya dhayamita, saizi yemesh, upamhi uye kureba ...
Welded waya pajira riya chakagadzirwa yepamusoro yakaderera-kabhoni simbi waya, kupatsanurwa ne otomatiki nemazvo uye echokwadi mechina michina gwapa kutsemura, uye ipapo electro kwakakurudzira inopisa-vakanyika kwakakurudzira, PVC uye dzimwe pamusoro kurapwa passivation uye plasticization. Chinyorwa: Yakadzika kabhoni simbi waya, waya yesimbi isina waya, nezvimwewo Mhando: kwakakurudzira simbi waya, Mhezi dzePVC dzakasungirirwa waya, waya yepaneru, simbi isina waya yakasungwa waya, nezvimwewo Kuruka uye hunhu: kwakakurudzira usati waruka, ...
Iyo yakawedzerwa simbi mesh chinhu chesimbi simbi inoumbwa neyakawedzera simbi mesh kubaya uye yekucheka muchina kugadzira mesh. Chinyorwa: Aluminium ndiro, yakaderera kabhoni simbi ndiro, isina simbi ndiro, nickel ndiro, mhangura ndiro, aluminium magnesium alloy ndiro, nezvimwewo Kuruka uye hunhu: Inoitwa nekutsika nekutambanudza iyo simbi ndiro. Iyo mesh pamusoro ine hunhu hwekusimba, ngura kuramba, yakanyanya tembiricha kusagadzikana, uye yakanaka mweya mweya. Mhando: Chibvumirano ...
Isu tinogadzira Nickel Mesh, Nickel Wire Mesh, Nickel Yakawedzerwa Simbi uye Nickel Mesh Electrode yeBattery. Izvi zvigadzirwa zvakagadzirwa zvemhando yepamusoro, yakachena kuchena nickel zvinhu. Isu tinogadzira izvi zvigadzirwa zvinotevera zveindasitiri zviyero zvakanyanya. Nickel Mesh inogona kugoverwa mumhando mbiri: Nickel waya wepasi (nickel waya jira) uye nickel yakawedzerwa simbi. Nickel waya meshes dzinonyanya kushandiswa sefaera midhiya uye mafuta sero electrode. Izvo zvakarukwa neyemhando yepamusoro nickel waya (kuchena> 99.5 kana pu ...